Top 5 tinh dầu massage cho body tốt và được ưa chuộng nhất | Muasalebang - Muasalebang
Top 5 tinh dầu massage cho body tốt và được ưa chuộng nhất | Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 tinh dầu massage cho body tốt và được ưa chuộng nhất | Muasalebang in Muasalebang
Uwoyela wokubhucunga yaziwa ngokuthi izakhi ze-quintessential zezitshalo ezinemiphumela emihle empilweni yomuntu, okusiza ukunciphisa ukucindezeleka nokunakekela isikhumba ngokuphumelelayo. Ngakho-ke, ama-spas amaningi nezikhungo zokwelapha zisebenzisa amafutha okubhucunga njengendlela yokwelapha ephumelela kakhulu. Manje ungasebenzisa le ndlela ekhaya Amafutha angu-5 aphezulu kakhulu futhi aziwa kakhulu wokubhucunga umzimba Okulandelayo
1 Ukubuyekezwa kwamafutha okubhucunga kuhle?
2 Indlela yokukhetha uwoyela we-massage ofanele
2.1 2.1 Ukusetshenziswa okuhlosiwe
2.2 2.2 Iphunga elifanele
2.3 2.3 Imikhiqizo edumile
3 Amafutha angu-5 aphezulu kakhulu futhi aziwa kakhulu wokubhucunga umzimba
3.1 3.1 Amafutha e-Chicco massage
3.2 3.2 Uwoyela wokubhucunga iBody Shop
3.3 3.3 I-Tanamera Herbal Massage Amafutha
3.4 3.4 I-Evoluderm i-brand lavender massage oil
3.5 3.5 I-Milaganics Argan Massage
Ukubuyekezwa kwamafutha okubhucunga kuhle?
Uwoyela wokubhucunga uketshezi oluqukethe izinhlanganisela ezinephunga elipholile elikhishwe ezingxenyeni zesitshalo. Iphunga lamafutha abalulekile liletha umuzwa wokuphumula, likhulula ukucindezeleka nokukhathala, liwukwelashwa kwezempilo futhi linakekela isikhumba esibushelelezi. Amafutha abalulekile anezici eziguquguqukayo ekamelweni lokushisa kuhlanganiswe nokubhucungwa komzimba kudala isisombululo sekhwalithi sempilo yesimanje.
Njengamanje, maningi amafutha okubhucunga ongawakhetha afanele izinjongo zakho njengokubhucunga unyawo, ukubhucunga umzimba ogcwele, ukubhucunga ubuso. Ngempendulo enhle evela kubantu abaye babhekana ne-massage amafutha abalulekile kuletha izinzuzo ezinkulu kusukela ekuhlanganiseni okuphelele kokubhucunga umzimba ogcwele ukunciphisa ukucindezeleka.
I-massage yomzimba ibhekwa njengekhambi lokwelapha eliphumelela kakhulu. Ukunyakaza kwe-massage okumnene kuzoshukumisa ngokuqondile ingqamuzana ngalinye emzimbeni ukudala umuzwa wenjabulo, ukunciphisa ukucindezeleka nokukhathala, futhi kwenze isikhumba sibe sihle. Ngamandla okubhucunga asebenza kumaphuzu wokutshopa ukuze unciphise ukukhathala, uzolala ngokushesha nangcono.
Ngaphezu kwalokho, uwoyela kanye ne-massage therapy nakho kukhulula ubuhlungu bamalunga, ubuhlungu beqolo, nokukhathala kwamadolo. Amafutha okubhucunga asiza abesifazane ukuba babe nesikhumba esicwebezelayo, esikhanyayo nesibushelelezi. Kuhlanganiswe namafutha ahlanzekile emvelo anephunga elimnandi kuzothuthukisa umphumela we-massage. Ukubhucungwa kwamafutha abalulekile kusiza ukubuyisela amandla abalulekile emzimbeni ukusiza ukukhulula ingcindezi, ukukhathala, nokugcwala ubungqabavu nsuku zonke.
Indlela yokukhetha uwoyela we-massage ofanele
Sebenzisa massage amafutha kuwumkhuba wokunakekelwa kwezempilo nobuhle kwabesifazane abaningi. Ukuze le ndlela iphumelele, okokuqala udinga ukukhetha umkhiqizo ofanele umzimba wakho.
2.1 Ukusetshenziswa okuhlosiwe
Uhlobo ngalunye lwamafutha wokubhucunga luzoba nokusetshenziswa okuhlukile futhi lulethe imiphumela ehlukene kuye ngezithako ezikuwoyela:
Umsebenzi wokuthuthukisa ubuhlungu, ukusekela ukwehla kwesisindo umugqa wemikhiqizo yamafutha abalulekile ashisayo akhishwe ezintweni ezifana nokhuni lukaphayini, ukhuni lomsedari, ujinja, isinamoni, …
Ukujikeleza kwegazi okugqugquzelayo nokunakekela isikhumba amafutha okugcoba anemvelo emnene, hhayi iphunga elimnandi kakhulu njengamafutha abalulekile we-chamomile, i-rose ebalulekile yamafutha, i-lavender ebalulekile yamafutha, njll.
Ukwelapha ukuqwasha, ikhanda lingamafutha abalulekile anamakha alula athobisa ingqondo futhi anciphise ukucindezeleka okufana namafutha abalulekile e-lotus, i-chamomile amafutha abalulekile, i-ylang ylang, i-lavender, i-menthol, njll.
2.2 Iphunga elifanele
Ngokuya ngokuthandwa, izidingo, kanye nokusetshenziswa komsebenzisi ngamunye, ungakhetha uwoyela wokubhucunga ohlukile. Uwoyela wokubhucunga Iphunga livame ukuletha umthelela onamandla futhi lisize umzimba uphumule, ngenkathi unakekela isikhumba esinamafutha ngezithako zemvelo ezifana netiye eliluhlaza, isihlahla setiye, i-rose ehlanganiswe namavithamini.
I-massage yamafutha angenalutho iwumkhiqizo okhishwe kumafutha amaminerali namafutha we-sunflower aqukethe amavithamini. Le mikhiqizo ayinawo ama-essance amaningi, ngakho-ke ikhono lawo lokusebenza emzimbeni womsebenzisi lihamba kancane, okuholela emiphumeleni yokwelapha ephansi.
>>>Inkomba: Ikhwalithi ephezulu engu-6 kanye namafutha abalulekile e-grapefruit akumele kunganakwa
2.3 Imikhiqizo edumile
Ukuthola amafutha e-massage emakethe namuhla akunzima kakhulu. Kodwa-ke, ukukhetha ukuthenga imikhiqizo kumabhrendi ahloniphekile athobela imithetho yekhwalithi kubalulekile. Ngenxa yokuthi uwoyela wokubhucunga unomthelela oqondile emzimbeni womsebenzisi, uma uthenga izimpahla zomgunyathi, izimpahla ezisezingeni eliphansi ngeke zifinyelele umphumela oyifunayo kodwa futhi zibangele ukucasuka nokulimala esikhumbeni.
Amafutha angu-5 aphezulu kakhulu futhi aziwa kakhulu wokubhucunga umzimba
Uma usazibuza mayelana nokubheka imikhiqizo kawoyela we-massage yekhwalithi, sicela ubheke phezulu 5 massage amafutha for umzimba Okulandelayo:
3.1 Amafutha e-Chicco massage
I-Chicco massage oil Ikhishwa ezingxenyeni zemvelo ezifana namafutha e-rice bran kanye ne-vitamin E ukusiza ukugcina isikhumba sithambile futhi sinempilo. Uwoyela we-rice bran usiza ukususa ukungcola kanye ne-sebum ukuhlanza isikhumba esithambile somntwana. Ngaphezu kwalokho, le essence iphinde isuse izikali eziqinile ezinemibala engavamile esikhumbeni somntwana ukusiza ingane ukuthi ihlale iphilile futhi ikhulise ukumelana.
Uwoyela wokubhucunga we-Chicco awunatshwala, awunambala, awunaphunga, awuna paraben, awucunuli, futhi uphephile esikhumbeni sezingane. Umkhiqizo uhlolelwa ukuthi awuphephile esikhumbeni esizwelayo futhi ugunyazwe ukuthi uphephile ezinganeni yizikhungo ezilawulayo e-US, EU, Japan kanye namazwe angaphezu kwe-100. Uwoyela owuketshezi oluwuketshezi olumunca kalula, onganamafutha, alungele ukusetshenziswa kuzo zonke izimo zezulu.
Kuye ngezidingo kanye nesimo sesikhumba somntwana, udinga indlela yokuyisebenzisa baby massage oil umehluko. Ukuze uthole ukubhucungwa okuthambile, vele uthele inani elincane lamafutha wokubhucunga entendeni yesandla sakho bese ufudumeza izandla zakho kancane bese ubhucunga amafutha kancane emzimbeni wengane yakho. Ukuze ususe uqweqwe esikhunjeni sekhanda, hlikihla kahle indawo “ngendle yenyathi” bese usebenzisa ikama elithambile ukuze uyibhulashe ihlanzeke futhi uyisule ngethawula elithambile likakotini.
Intengo yesithenjwa: 329,000 VND
>>> Bona okwengeziwe: Amafutha angama-6 angcono kakhulu ekamelo, adumile namuhla
3.2 Uwoyela wokubhucunga iBody Shop
Body Shop massage amafutha Ikhishwe ephunga lezimbali zemvelo namakhambi asekelwe kubuchwepheshe bamaketanga besimanje, isebenza kahle kusukela ekusetshenzisweni kokuqala. Amafutha e-lavender abalulekile anephunga eliphumuzayo lemvelo elenza umzimba uphile futhi iphunga elimnandi lisiza ukubuyisela umoya ngemva kosuku olude olukhathazayo emsebenzini.
Ngaphezu kwalokho, amafutha abalulekile nawo asiza ukucaca kwengqondo, ukusekela ukujikeleza kwegazi ukusiza isikhumba ukuba siqine, sibushelelezi, sinikeze umswakama, sithambise isikhumba, sisuse amabala omile, i-pigmentation, i-roughness ebusweni besikhumba.
Ehlanganiswe nemithi yokwelapha yokubhucunga, amafutha e-Body Shop massage afakazelwa ukuthi ayaphumuza, anciphisa ukugqugquzeleka, abuyisele izinzwa zomzimba futhi andise ukumelana komzimba okusebenzayo.
Intengo yesithenjwa: 839,000 VND
>>>Funda kabanzi: Iyini imiphumela yamafutha abalulekile e-cajeput? Top 6 best cajeput amafutha abalulekile
3.3 I-Tanamera Herbal Massage Amafutha
I-Tanamera Herbal Massage Oil, ekhishwe emvelweni, yaziwa njengesixazululo esiphephile nesisebenzayo. Ngesikhathi esifanayo, kukusiza ukuxosha ukukhathala, ukukhuthaza ukujikeleza kwegazi, ukukhuthaza impilo, kuletha umuzwa wokuphumula ukuze usize umzimba uhlale unempilo futhi ugcwele ubungqabavu.
Izithako eziyinhloko ze-Tanamera Herbal Massage Oil zikhishwa ku-aloe, i-turmeric, i-lemongrass, i-ginger, amafutha esundu, u-anyanisi, isinamoni, upelepele omnyama, iqabunga le-pandan, amafutha etiye, ama-clove. Ukuletha umphumela wokugqugquzela ukujikeleza kwegazi, i-metabolism, kanye ne-detoxifying umzimba. Ngaphezu kwalokho, kuyasiza nokugcina ukushelela kwesikhumba, ukunciphisa ukugcinwa kwamanzi nokuqunjelwa, futhi kuvuselele ubungqabavu besikhumba.
Kuhlanganiswe nomphumela wokusekela uhlelo lwe-lymphatic, ukuqeda ubuthi obuvela emzimbeni. Uwoyela wokubhucunga ngezingcaphuno zemvelo ezingenawo amakhemikhali ukusiza ukunakekela impilo yezingane, omama abakhulelwe nomama ngemva kokubeletha. Umkhiqizo ukhishwa ngokuvumelana nesimiso sokungabi namakhemikhali ayingozi, akukho mbala, akukho iphunga lokwenziwa, elifanele zonke izinhlobo zesikhumba, ikakhulukazi omama abakhulelwe nabangemva kokubeletha.
Intengo yesithenjwa: 450,000 VND
3.4 I-Evoluderm i-brand lavender massage oil
I-Evoluderm brand lavender massage oil ikhishwa kumafutha abalulekile e-lavender, amakhambi namavithamini ukusiza ubuhle nokunakekelwa kwezempilo kahle kakhulu. I-Evoluderm brand lavender massage oil ingamafutha ayisimangaliso asetshenziswa kaningi ekwelapheni nasebuhleni ukusiza ukwehlisa ingcindezi, ukukhathala, kanye nokwelapha ngempumelelo ikhanda kanye nemigraines.
Umugqa womkhiqizo unomphumela we-antiseptic ongasetshenziswa ezindaweni ezinezinduna, izinduna, ukulunywa yizinambuzane, amathambo namalunga ukuze kuncishiswe ubuhlungu noma ukuvuvukala. I-lavender ingasetshenziswa futhi njengesidambisa, sibonga i-antibacterial ngenxa yezakhiwo zayo eziqinile zokubulala amagciwane ukusiza ukuphulukisa amanxeba nokusha okusetshenziselwa ngempumelelo abesifazane abakhulelwe.
Umugqa womkhiqizo onamakhambi aphephile udumile ekubhucungeni kokwelapha ukusiza isikhumba sithambile, sibushelelezi futhi singabi namafutha. I-Evoluderm brand lavender massage oil inomphumela wokugcina amanzi, ukulinganisa umswakama ukusiza ukuvikela, ukuvuselela, nokuthambisa isikhumba. Ngaphezu kokusetshenziswa kwe-massage yobuso nomzimba, umkhiqizo ubuye ube nokusetshenziswa kwezinwele nezinzipho.
Intengo yesithenjwa: 175,000 VND
>>> Funda kabanzi: Amafutha abalulekile kaphayini obomvu aphezulu ayi-6 athenjwe kakhulu namuhla
3.5 I-Milaganics Argan Massage
Umkhiqizo we-Milaganics Argan Oil Massage ukhishwa kuma-alimondi futhi uyasebenza ekunakekeleni isikhumba nezinwele. Ikhishwe ngokuphelele emvelweni ngendlela emsulwa yokucindezela okubandayo ngaphandle kokusebenzisa amakhemikhali. Ngenxa yalokho, igcina izici zayo zemvelo ngephunga elilula, elisha eliphephile empilweni yabasebenzisi.
Imikhiqizo enamazinga aphezulu kavithamini E nama-fatty acids asetshenziswa njenge-moisturizer ukusiza ukuhlobisa, ukuvuselela isikhumba, ukunciphisa ukwakheka kwemibimbi nokuvimbela induna ngempumelelo. Kuhlanganiswe nemiphumela yokulwa nokuguga ukuvimbela ukuguga kwesikhumba nokubuyisela ukunwebeka kwesikhumba ukuletha ubusha nokuthamba.
Kwabesifazane abanesikhumba esiqhekekile, esinyakazayo, esishwabene ngemva kokubeletha, I-Milaganics Argan Oil Massage iyisinqumo esihle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, umugqa womkhiqizo uphinde uphumelele ekubuyiseleni izinwele ezifrizzy, ezingaphili, ukunciphisa ukukhwabanisa nokuqina, ukwandisa inani lezakhamzimba ezinweleni futhi kuvimbele i-dandruff esikhumbeni.
Intengo yesithenjwa 159,000 VND
Nge Amafutha angu-5 aphezulu kakhulu futhi aziwa kakhulu wokubhucunga umzimba Okungenhla kuzokusiza ukuthi ukhethe umugqa womkhiqizo olungele wena. Ukubhucunga ngamafutha abalulekile kwaziwa njengokwelapha okusebenzayo ukunciphisa ingcindezi nokukhathala. Kuyadingeka ukuthi uqinisekise ukuthi uthola futhi uthenge imikhiqizo kawoyela we-massage ehlonishwayo ukuze ungaphazamisi ukusebenza kahle kokusetshenziswa.
>>>Funda kabanzi: [Review] Ama-diffuser aphezulu kawoyela abalulekile ayi-8 namuhla
Xem Thêm Top 6 mặt nạ dưỡng da tay tốt nhất 2022 | Muasalebang
Cách làm bánh khoai mì nướng bằng nồi cơm điện ăn là nghiện | Muasalebang
Cách đánh kem trứng gà bằng máy xay sinh tố đơn giản | Muasalebang